Batman ndiwo mutambo slots kuti rave inobva yakakurumbira Gotham City; ine zvakasiyana-siyana zvinoratidza kuti vachengete vatambi vakagamuchira. Kupinda chinofadza rwendo uyu shasha hunhu uye regai vakakwira Dark Knight chiedza pfuma yenyu. Chinhu chakanaka slots mutambo anogona kuridzwa pamahwendefa, Mobiles, desktops uye zvakawanda. Kana kuverenga enyaya vakanakidzwa zvino wava nechokwadi kunakidzwa ichi rima dingindira yakavakirwa slots mutambo.
Kufanana zita slots kunoratidza, mutambo uyu slots iyo yakavakirwa rimwe watinoda zvikuru magamba ari pano kupa vatambi vakanaka payouts. The slots rakagadzirwa pamusoro rima, usiku kuchinaya, musoro nerima zvayo zvose zvizhinji akahwina kuuya nzira yako. Enda mberi uye kutamba slots ichi chinoshamisa mutambo uye ona chii kwauri.
More pamusoro yokuvaka pamusoro Batman
Batman cheap car insurance vave yakataurwa Nextgen uchitamba mutambo wacho uri mumwe kumusoro uchitamba mutambo wacho Developers vari iGaming indasitiri. Ndivo mumwe wemapiyona nokusika playing mitambo kuti rinosundwa unhu, vanoshandira pamwe kusika zvakanakisisa vatambi vanakidzwe. Ivo kuramba kushanda uye kurwira dzaungagona playing mitambo hwokuratidza okugadzira zvinhu.
Batman slots ane 5 Gwenzi uye 50 paylines; mari saizi yemakomo ari pakati 0.01-1.00 uye vatambi vanogona tinya kuruka bhatani pakangotanga bheji akaiswa. Mumwe nguva mutambi nyika chienderane zviratidzo pashure ose kuruka, mutambi tichaverengerwa icho pamwe Unobata. Kune zvakawanda mikana kuhwina dzakakwirira anokomborera slots ichi chinofadza mutambo. Yaiva vose vatambi kubva Comics, mumwe nomumwe ane whopping uwandu payouts kudurura vatambi vane.
The Masked munhu nyati iri slots uye kutsiva vamwe vatambi kupedza kuhwina mubatanidzwa. Kana Batman inobatsira ndakapedza mubatanidzwa, ipapo Unobata vari nekaviri pangoro mutambo. The uparadzire Ukuwo, inomiririrwa Commissioner Gordon uye chiratidzo ichi kuchaita ugomutsa ari apiwa Tunoruka kumativi uye kana denderedzwa iri kunoitika, Unobata zvose kuti kaviri.
Chii chauri vakamirira? Vanomhanyira Coinfalls Casino uye edza nemhanza yenyu Gwenzi uyu shasha murume slots uye toona Batman kwauri. The Dark knight ane zvakawanda mibairo kumirira iwe; Ivai nechokwadi kuti imi kuwana maoko enyu pamusoro pavo.